मेरो श्रीमानले म सँग त सम्पर्क गर्न सक्दैनन् भने नातिनीलाई कसरी गरे ? भन्दै आरोपीकी श्रीमती मिडियामा (भिडियो हेर्नुस्) – GALAXY
मेरो श्रीमानले म सँग त सम्पर्क गर्न सक्दैनन् भने नातिनीलाई कसरी गरे ? भन्दै आरोपीकी श्रीमती मिडियामा (भिडियो हेर्नुस्)
झापा । झापामा आफ्नै हजुर बुवाले नातिनीलाई क र णी गरेको विषय यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा निकै नै भाइरल भई रहेको छ । हजुर बुवाले नै नातिनीलाई पटक पटक क र णी गरेको हुनाले नातिनीले त्यो कुरा सहन नसकेर दे ह त्या ग गरेकी छन् ।
जस्को आमाले उनलाई छोरीको संरक्षणकालागी माईतमा लगेर राखेकी थिईन् । दिप्ति आफ्नी आमाकी एक्ली छोरी हुन् । दिप्तिले म र्नुभन्दा अघि आफुलाई आफ्नै हजुरबुवाले पटक पटक क र णी गरेको कुरा छिमेकीलाई बताएको कुरा बाहीरिएपछि यो कुरा सार्वजनिक भएको हो ।
यो घ ट ना सार्वजनिक भए लगत्तै आरोपीकी श्री मतीले भने यो सबै झुटो भएको बताएकी छन् । उनले आफ्नो श्री मानले आफुलाई नै सम्पर्क गर्न नसक्ने बताउँदै नातीनीलाई कसरी गर्न सक्नु भयो रु त्योपनि पटक पटक भनेर प्रश्न गरेकी छन् । उनले श्री मानप्रति केवल झुटो आ रो प लगाएको बताएकी छिन् ।
दिप्ती रसाइलीको घटनाले अहिले फेरी परिवार भित्रै बालिकाहरु सुरक्षित छैनन् भन्ने देखाउँछ । कल्पना विश्वकर्मा छोरीलाई माइतीमा राखेर वैदेशिक रोजगारीका लागि थिइन । उनी ५ वर्ष देखि विदेशमा थिइन् । आमाबुवाको काखमा छोरी छोडेर उनी विदेश जाने आउने जाने गर्थिन । उनी वैदेशिक रोजगारीका लागि कतारमा थिइन् ।
तर उनले आफ्नै हजुरवुवा खड्कबहादुर कामीे नातिनीलाई यस्तो गरे भन्दै आएकी छन् । हजुरबुवाबाट असुरक्षित भएपछि अहिले दिप्तीले संसारबाट विदा लिएकी छन् । उनले आमालाई यो सबै कुरा म्यासेज पठाएर जानकारी गराएकी थिइन् । तर आमालाई त्यस्तो जानकारी गराएपछि फेरी अर्का हजुरबुवासंग त्यही बालिकाको नराम्रो सम्बन्ध छ उसले ग र्भ पनि फा ले को भनेर समाज बसालेर त्यस बारेमा छलफल पनि चलाए ।